9 Apr 2018 . 5:21 PM
သင်္ကြန်အချိန်အခါရောက်လို့လာပြီ။ အပြင်လျှောက်လည်တဲ့သူက လျှောက်လို့လာကြမယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ခရီးသွားတဲ့သူကခရီးတွေလျှောက်သွားကြမယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ အချိန်ဖြုန်းတဲ့သူကလည်း ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ အမှတ်တရတွေဖန်တီးကြမယ်။ နယ်ဝေးက ဖေဖေမေမေဆီပြန်ပြီး အလွမ်းသယ်တဲ့သူတွေကလည်း အလွမ်းသယ်ကြမယ်။ အစီအစဉ်ရှိတဲ့သူတွေက ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ ကိုယ် သင်္ကြန်အချိန်အခါကို ကုန်ဆုံးကြမယ်။ ဒါပေမယ့် အစီအစဉ်မရှိကြသေးတဲ့ ကိုကို မမ တွေလည်း ရှိလို့နေပါသေးတယ်တဲ့။ အစီအစဉ်မရှိကြသေးတဲ့ သူတွေ ဘာမှမစဉ်းစားရသေးဘူး။ ဟုတ်တယ်မလား? ဘာမှလည်း မလုပ်ချင်၊ ဘယ်မှလည်း မသွားချင်လို့ အိမ်မှာပေကပ်ပြီးနေမယ်လို့များ စဉ်းစားလို့နေကြလား။
အဲဒီလိုအတွေးမျိုးတွေကို မတွေးကြပါနဲ့။ သင်္ကြန်ဆိုတာ တစ်နှစ်မှ တစ်ခါကျင်းပကြတာ။ ပြီးရင် သင်္ကြန်ဆိုတာက မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူးအချိန်အခါမှာ ဒီလိုမျိုးအလဟဿအချိန်မကုန်ဆုံးရဘူးလေနော်။ ဒါဆို ဘယ်လိုအချိန်ကုန်ရမလဲ မေးရင် သင်္ကြန်လေးရက်ကို ဒီလိုမျိုးအချိန်ကုန်ဆုံးကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။
သင်္ကြန်အကြိုနေ့က သင်္ကြန်အစ၊ သင်္ကြန်ကို ကြိုတဲ့ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက် အတာအိုးနဲ့ သင်္ကြန်ပန်းကပ်ပါ။ ကိုယ့်အိမ်တစ်အိမ်လုံးကို မဟုတ်ခဲ့ရင်တောင် ကိုယ့်အိမ်ခန်းနဲ့ ပစ္စည်းတွေအားလုံးကို ရှင်းလင်းပါ။ လိုတာတွေ သေသေသပ်သပ်သိမ်းဆည်းပြီး မလိုအပ်တော့တဲ့ပစ္စည်းတွေကို လှူဒါန်းပစ်ပါ။ ကုသိုလ်လည်းရတယ်။ သူများတွေအတွက်လည်း အသုံးတည့်စေတယ်။ ပြီးရင်တော့ အကြိုနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက် လမ်းမမှာ စည်စည်ကားကားသိပ်ဖြစ်မှာလည်း မဟုတ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ကိုယ် မုန့်လုံးရေပေါ်လုပ်စားပါ။ မုန့်လုံးရေပေါ်ထဲမှာ ကျီစားတဲ့အနေနဲ့ ငရုတ်သီးတွေထည့်လုံးတာတို့ လုပ်ကြပါတယ်။ အရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ညနေဘက်ရောက်ရင်တော့ ကိုယ့်အိမ်နီးနားချင်းတွေကို မုန့်လိုက်ပေးရင် သင်္ကြန်လေညင်းလေးကို ခံရင်း လမ်းလျှောက်ကြည့်ပါ။
ဒုတိယနေ့တော့ အားလုံး ပျော်ပျော်ပါးပါးကြီး ရေပိုက်တွေထုတ်၊ အုန်းလက်တွေထိုးပြီး လမ်းဘေးမှာ ရပ်ကွက်ကလေးတွေနဲ့ ရေပတ်တဲ့သူကပတ်၊ မဏ္ဍပ်လျှောက်လည်တဲ့သူက လည်ကြပါပြီ။ သင်္ကြန်ထွက်လည်ချင်တဲ့သူဆိုရင်တော့ ရန်ကုန်မှာ အိမ်တွင်းအောင်းနေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကိုစုပါ။ ပြီးရင် TMF 2nd Day Ticket ကိုဝယ်ပြီး ကဲပါ။ Thingyan Music Festival ရဲ့ အထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့ Krewella DJ/ Producer တို့လာရောက်ဖျော်ဖြေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် TMF မှာ ကဲပါ။ Krewella ရဲ့ Remix တွေနဲ့ ဆို စိတ်ကြိုက်ပျော်လို့ကောင်းတယ်လေ။ ညဘက် ဆက်ကဲချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အိမ်မှာ မုန့်လုပ်စားရင်း တစ်ခုခုသောက်ရင်း စကားပြောတာကလည်း အမှတ်တရတစ်မျိုးပါပဲ။
အကြတ်နေ့မှာလည်း မဏ္ဍပ်အကြီးကို မတက်ပဲ ကိုယ့်အမျိုးတွေလုပ်ထားတဲ့ အုန်းလက်မဏ္ဍပ်မှာ မနက်တစ်ပိုင်း ရေပတ်ပါ။ နှစ်ရက်ဆက်တိုက်အပြင်ထွက်ရင် ပျင်းဖို့ကောင်းပါတယ်။ လူလည်းပင်ပန်းတာပေါ့။ Water Festival ပွဲတွေရဲ့ Line-up တွေကြည့်ရသလောက် ကောင်းတဲ့ DJ တွေလည်းသိပ်မရှိတော့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ကလေးတွေနဲ့ ရေဆော့ရင်း ကစားရင် မနက်တစ်ပိုင်းအချိန်ကုန်ဆုံးလိုက်ပါ။ နေ့လည်ပိုင်းရောက်ခဲ့ရင်တော့ အကြိုနေ့က လုံးထားတဲ့ မုန့်လုံးရေပေါ်တွေထဲက ငရုတ်သီးတွေနဲ့ လုံးထားတာတွေကို ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေကို လိုက်ပို့ပြီး ဆေးထိုးပါ။ အိုးမဲသုတ်ဖို့လည်း ယူသွားနော်။ မုန့်ပေးတဲ့အချိန်မှာ အိုးမဲသုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် တော်တော်ရယ်နေရမှာ။ ပြီးရင် သူငယ်ချင်းအိမ်ကို ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် မုန့်တွေတစ်ဝကြီးစားပြီးမှ ပြန်ပေါ့။ (ဒါမှမဟုတ်) သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကို စုပြီး သင်္ကြန်ထမင်း ချက်စားကြရင်လည်းပျော်ဖို့ကောင်းပါသေးတယ်။
အတက်နေ့က လူတိုင်း နောက်ဆုံးပိတ် အိတ်နဲ့ လွယ်ဆိုသလို အပြတ်ကဲတဲ့နေ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အန္တရာယ်ဖြစ်မှာကြောက်တဲ့သူဆိုရင်တော့ ကိုယ်သူငယ်ချင်းအိမ်လျှောက်လည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်အမျိုးအိမ်ကို လျှောက်လည်ရင်း မုန့်ပတ်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပါ။ ကဲချင်တဲ့သူဆိုရင်တော့ သူငယ်ချင်းတွေကို စုပြီး TMF နဲ့ Underground : Revolution 2018 မဏ္ဍပ်ကိုသာကဲပါ။ မဏ္ဍပ်နှစ်ခုလုံးက လုံခြုံမှုလည်းရှိတယ်။ Service လည်းကောင်းပြီး TMF ဟာဆိုရင် ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ DJ ဖြစ်တဲ့ Brennan Heart ကို ဖိတ်ကြားထားပါတယ်တဲ့နော်။ ပြီးရင်တော့ အိမ်ပြန်ပြီး သင်္ကြန်ကို နှုတ်ဆက်လိုက်ကြနော်။
မျိုးရိုးအစဉ်အလာကို ထိန်းသိမ်းတဲ့အနေနဲ့ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှာ ရပ်ကွက်အတိုင်းလုပ်တဲ့ အညစ်အကြေးတွေဖယ်ရှားခြင်းထုံးတမ်းစဉ်လာဖြစ်တဲ့ ပရိတ်ရွတ်ခြင်းကို ပါဝင်ဆင်နွဲပါ။ ပြီးရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ ဘိုးဘိုးဘွားဘွားပဲဖြစ်ဖြစ် ဘိုးဘွားရိပ်သာက သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို ခေါင်းလျှော်ပေးခြင်း၊ လက်သည်းခြေသည်းညှပ်ပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရင်း ကုသိုလ်ရယူလိုက်ပါနော်။
အားလုံးပဲ သာယာတဲ့ သင်္ကြန်နှစ်သစ်ကူးအချိန်အခါကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။
သင်ျကွနျအခြိနျအခါရောကျလို့လာပွီ။ အပွငျလြှောကျလညျတဲ့သူက လြှောကျလို့လာကွမယျ။ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ခရီးသှားတဲ့သူကခရီးတှလြှေောကျသှားကွမယျ။ ကိုယျ့ခဈြသူနဲ့ အခြိနျဖွုနျးတဲ့သူကလညျး ကိုယျ့ခဈြသူနဲ့ အမှတျတရတှဖေနျတီးကွမယျ။ နယျဝေးက ဖဖေမေမေဆေီပွနျပွီး အလှမျးသယျတဲ့သူတှကေလညျး အလှမျးသယျကွမယျ။ အစီအစဉျရှိတဲ့သူတှကေ ကိုယျ့အစီအစဉျနဲ့ ကိုယျ သင်ျကွနျအခြိနျအခါကို ကုနျဆုံးကွမယျ။ ဒါပမေယျ့ အစီအစဉျမရှိကွသေးတဲ့ ကိုကို မမ တှလေညျး ရှိလို့နပေါသေးတယျတဲ့။ အစီအစဉျမရှိကွသေးတဲ့ သူတှေ ဘာမှမစဉျးစားရသေးဘူး။ ဟုတျတယျမလား? ဘာမှလညျး မလုပျခငျြ၊ ဘယျမှလညျး မသှားခငျြလို့ အိမျမှာပကေပျပွီးနမေယျလို့မြား စဉျးစားလို့နကွေလား။
အဲဒီလိုအတှေးမြိုးတှကေို မတှေးကွပါနဲ့။ သင်ျကွနျဆိုတာ တဈနှဈမှ တဈခါကငျြးပကွတာ။ ပွီးရငျ သင်ျကွနျဆိုတာက မွနျမာ့နှဈသဈကူးအခြိနျအခါမှာ ဒီလိုမြိုးအလဟဿအခြိနျမကုနျဆုံးရဘူးလနေျော။ ဒါဆို ဘယျလိုအခြိနျကုနျရမလဲ မေးရငျ သင်ျကွနျလေးရကျကို ဒီလိုမြိုးအခြိနျကုနျဆုံးကွညျ့ပါလို့ပွောခငျြပါတယျ။
သင်ျကွနျအကွိုနကေ့ သင်ျကွနျအစ၊ သင်ျကွနျကို ကွိုတဲ့ရကျဖွဈတဲ့အတှကျ အတာအိုးနဲ့ သင်ျကွနျပနျးကပျပါ။ ကိုယျ့အိမျတဈအိမျလုံးကို မဟုတျခဲ့ရငျတောငျ ကိုယျ့အိမျခနျးနဲ့ ပစ်စညျးတှအေားလုံးကို ရှငျးလငျးပါ။ လိုတာတှေ သသေသေပျသပျသိမျးဆညျးပွီး မလိုအပျတော့တဲ့ပစ်စညျးတှကေို လှူဒါနျးပဈပါ။ ကုသိုလျလညျးရတယျ။ သူမြားတှအေတှကျလညျး အသုံးတညျ့စတေယျ။ ပွီးရငျတော့ အကွိုနဖွေ့ဈတဲ့အတှကျ လမျးမမှာ စညျစညျကားကားသိပျဖွဈမှာလညျး မဟုတျတဲ့အတှကျ ကိုယျ့မိသားစုနဲ့ကိုယျ မုနျ့လုံးရပေျေါလုပျစားပါ။ မုနျ့လုံးရပေျေါထဲမှာ ကြီစားတဲ့အနနေဲ့ ငရုတျသီးတှထေညျ့လုံးတာတို့ လုပျကွပါတယျ။ အရမျးပြျောဖို့ကောငျးပါတယျ။ ညနဘေကျရောကျရငျတော့ ကိုယျ့အိမျနီးနားခငျြးတှကေို မုနျ့လိုကျပေးရငျ သင်ျကွနျလညေငျးလေးကို ခံရငျး လမျးလြှောကျကွညျ့ပါ။
ဒုတိယနတေ့ော့ အားလုံး ပြျောပြျောပါးပါးကွီး ရပေိုကျတှထေုတျ၊ အုနျးလကျတှထေိုးပွီး လမျးဘေးမှာ ရပျကှကျကလေးတှနေဲ့ ရပေတျတဲ့သူကပတျ၊ မဏ်ဍပျလြှောကျလညျတဲ့သူက လညျကွပါပွီ။ သင်ျကွနျထှကျလညျခငျြတဲ့သူဆိုရငျတော့ ရနျကုနျမှာ အိမျတှငျးအောငျးနတေဲ့သူငယျခငျြးတှကေိုစုပါ။ ပွီးရငျ TMF 2nd Day Ticket ကိုဝယျပွီး ကဲပါ။ Thingyan Music Festival ရဲ့ အထူးဖိတျကွားထားတဲ့ Krewella DJ/ Producer တို့လာရောကျဖြျောဖွမှောဖွဈတဲ့အတှကျ TMF မှာ ကဲပါ။ Krewella ရဲ့ Remix တှနေဲ့ ဆို စိတျကွိုကျပြျောလို့ကောငျးတယျလေ။ ညဘကျ ဆကျကဲခငျြသေးတယျဆိုရငျတော့ ကိုယျသူငယျခငျြးတှနေဲ့ အိမျမှာ မုနျ့လုပျစားရငျး တဈခုခုသောကျရငျး စကားပွောတာကလညျး အမှတျတရတဈမြိုးပါပဲ။
အကွတျနမှေ့ာလညျး မဏ်ဍပျအကွီးကို မတကျပဲ ကိုယျ့အမြိုးတှလေုပျထားတဲ့ အုနျးလကျမဏ်ဍပျမှာ မနကျတဈပိုငျး ရပေတျပါ။ နှဈရကျဆကျတိုကျအပွငျထှကျရငျ ပငျြးဖို့ကောငျးပါတယျ။ လူလညျးပငျပနျးတာပေါ့။ Water Festival ပှဲတှရေဲ့ Line-up တှကွေညျ့ရသလောကျ ကောငျးတဲ့ DJ တှလေညျးသိပျမရှိတော့ ရပျကှကျထဲမှာ ကလေးတှနေဲ့ ရဆေော့ရငျး ကစားရငျ မနကျတဈပိုငျးအခြိနျကုနျဆုံးလိုကျပါ။ နလေ့ညျပိုငျးရောကျခဲ့ရငျတော့ အကွိုနကေ့ လုံးထားတဲ့ မုနျ့လုံးရပေျေါတှထေဲက ငရုတျသီးတှနေဲ့ လုံးထားတာတှကေို ကိုယျ့သူငယျခငျြးတှကေို လိုကျပို့ပွီး ဆေးထိုးပါ။ အိုးမဲသုတျဖို့လညျး ယူသှားနျော။ မုနျ့ပေးတဲ့အခြိနျမှာ အိုးမဲသုတျလိုကျမယျဆိုရငျ တျောတျောရယျနရေမှာ။ ပွီးရငျ သူငယျခငျြးအိမျကို ရောကျတုနျးရောကျခိုကျ မုနျ့တှတေဈဝကွီးစားပွီးမှ ပွနျပေါ့။ (ဒါမှမဟုတျ) သူငယျခငျြးတှအေားလုံးကို စုပွီး သင်ျကွနျထမငျး ခကျြစားကွရငျလညျးပြျောဖို့ကောငျးပါသေးတယျ။
အတကျနကေ့ လူတိုငျး နောကျဆုံးပိတျ အိတျနဲ့ လှယျဆိုသလို အပွတျကဲတဲ့နလေ့ညျး ဖွဈပါတယျ။ အန်တရာယျဖွဈမှာကွောကျတဲ့သူဆိုရငျတော့ ကိုယျသူငယျခငျြးအိမျလြှောကျလညျတာပဲဖွဈဖွဈ၊ ကိုယျ့အမြိုးအိမျကို လြှောကျလညျရငျး မုနျ့ပတျစားတာပဲဖွဈဖွဈ လုပျပါ။ ကဲခငျြတဲ့သူဆိုရငျတော့ သူငယျခငျြးတှကေို စုပွီး TMF နဲ့ Underground : Revolution 2018 မဏ်ဍပျကိုသာကဲပါ။ မဏ်ဍပျနှဈခုလုံးက လုံခွုံမှုလညျးရှိတယျ။ Service လညျးကောငျးပွီး TMF ဟာဆိုရငျ ဒိတျဒိတျကွဲ DJ ဖွဈတဲ့ Brennan Heart ကို ဖိတျကွားထားပါတယျတဲ့နျော။ ပွီးရငျတော့ အိမျပွနျပွီး သင်ျကွနျကို နှုတျဆကျလိုကျကွနျော။
မြိုးရိုးအစဉျအလာကို ထိနျးသိမျးတဲ့အနနေဲ့ နှဈဆနျးတဈရကျနမှေ့ာ ရပျကှကျအတိုငျးလုပျတဲ့ အညဈအကွေးတှဖေယျရှားခွငျးထုံးတမျးစဉျလာဖွဈတဲ့ ပရိတျရှတျခွငျးကို ပါဝငျဆငျနှဲပါ။ ပွီးရငျတော့ ကိုယျ့ရဲ့ ဘိုးဘိုးဘှားဘှားပဲဖွဈဖွဈ ဘိုးဘှားရိပျသာက သကျကွီးရှယျအိုတှကေို ခေါငျးလြှျောပေးခွငျး၊ လကျသညျးခွသေညျးညှပျပေးခွငျးတို့ကို ပွုလုပျရငျး ကုသိုလျရယူလိုကျပါနျော။
အားလုံးပဲ သာယာတဲ့ သင်ျကွနျနှဈသဈကူးအခြိနျအခါကို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးလိုကျရပါတယျ။